Uyilo lwePcb, iTekhnoloji yePcb, iBhodi yeSekethe- iPandawill
Imveliso kunye nenkqubo yophuhliso
Yenze ngokufanelekileyo kwinqanaba loyilo
I-Pandawill ibonelela ngenkxaso yoyilo lwe-PCB kungekuphela nje ngokuchaza into esiyifunayo, kodwa nento esiyenzayo kuyilo lwakho ekufumaneni idatha ukuya kwimveliso egqityiweyo. Uyilo lwePCB lubandakanya: Isantya esiphezulu, iAnalog, iHydidi yeAnalog-Digital, Ukuxinana okuphezulu / iVoltage / aMandla, iRF, i-Backplane, i-ATE, iBhodi ethambileyo, iBhodi eQinisekayo yeFlex, iBhodi yeAluminiyam njl.
I-multilayer, i-HDI, ukujika ngokukhawuleza
Iipandawill Circuits zivelisa kwaye zinika uluhlu olubanzi lobuchwephesha obuphezulu obuprintiweyo kwitekhnoloji yebhodi yesekethe, imiqulu, iindleko kunye nemveliso yeenketho zexesha elikhokelayo ngokusekwe kulwazi lwethu olusisiseko lwe-PCB kunye nenkqubo yokuhlangana kunye nemfuno yakho.
Umgangatho wokubonelela, ukuThintela ukuHanjiswa, iiNdleko eziPhethwe
Ngeqela elinamava nelinolwazi lokuthenga, sinobungcali bokuchonga iindlela zokufumana ngokusekwe kwiimfuno ezithile zemveliso nganye kunye nomthengi kunye nokubonelela ngamalungu afanelekileyo, ukuhanjiswa kwezinto, ukuhla kweendleko kunye nolawulo lwesitokhwe.
Ukusuka prototyping ukuya kwimveliso yobuninzi
Ngawo omabini umngxuma (i-THT) kunye nomgangatho wendlela (SMT) yokuhlangana, zombini zikhokelwa kwaye i-RoHS iyahambelana, uluhlu lwenkonzo yethu ye-PCBA ukusuka kumzekelo wokuqhubekeka nokwenziwa kweendibano ezintsonkothileyo, ezobuchwephesha be-PCB kwimithamo ephantsi ukuya ephakathi.
IBHUKU LOKWAKHA NENDIBANO YOMATSHINI
Ukuxhasa ukusuka ku-A ukuya ku-Z
Ukongeza kwinkonzo yendibano ye-PCB, sibonelela ngebhokisi yokwakha indibano yokudityaniswa kweesistim kunye neemodyuli kunye nokudityaniswa kwemveliso epheleleyo. Ngenethiwekhi yethu yabathengisi abakhethiweyo, siyakuxhasa ukusuka ku-A kuye ku-Z, ukusuka kwikoteyishini ukuya kwinqanaba lokuvelisa ubunzima beprojekthi yakho.